နယူတန် Mail - အီးမေးလ် & ပြက္ခဒိန် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » နယူတန်မေးလ် - ဂျီမေးလ်, Outlook များအတွက်အီးမေးလ် App ကို, IMAP ကို
နယူတန်မေးလ် - ဂျီမေးလ်အတွက်အီးမေးလ်က App, Outlook, IMAP ကို ​​APK ကို
နယူတန်ကိုဖတ်ပြေစာများနှင့်တူပါဝါ features တွေနှင့်အတူသင့်အီးမေးလ် supercharges တဲ့ကြေးပေးသွင်း-based App ဖြစ်ပါတယ်, နောက်ပိုင်းတွင် Send, ပြန်လုပ်ရန် Send, ချိတ်ဆက်ထားပြီး Apps ကပ, ပြန်လည်စုစည်းမှု (ကသာအင်္ဂလိပ်), မှေးနှင့်ထို့ထက် ပို. က Android Phone ကိုဖြတ်ပြီး, Tablet ကိုနှင့် Wear ။ တစ်ဦး 14 ရက်ကြာအခမဲ့အစမ်းလာပါတယ်။
နယူတန် $ 49.99 / တစ်နှစ်တစ် In-app ကိုကြေးပေးသွင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 14 ရက်ကြာအခမဲ့အစမ်းတွဲမညှို့နဲ့စတင်များနှင့်အကြှနျုပျတို့သညျကျောကိုကြည့်ဘယ်တော့မှပြောပါ Get ။
ဂျီမေးလ်, ချိန်း, Yahoo Mail, Hotmail / Outlook, iCloud, Google Apps, ရုံး 365 အပေါင်းတို့နှင့် IMAP ကိုအကောင့်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
* နေရာတိုင်းမှာသုံးပါ, ပြီးတာနဲ့ Up ကို Sign *
သင့်ရဲ့နယူတန်အကောင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုနယူတန်ရန်သင့်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသင့်ရဲ့ device များဖြတ်ပြီး, ချက်ချင်းအချိန်မရွေးသင့်အီးမေးလ်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့အဲဒါကိုအသုံးပြုပါ - Mac အတွက်သို့မဟုတ် Windows, Wear, အန်းဒရွိုက်ဖုန်း, Tablet ကိုရလိမ့်မည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပါပဲ။
* အဘယ်ကြောင့်နယူတန်သင်လိုအပ်တစ်ခုတည်းသောအီးမေးလ်က App ဖြစ်ပါတယ် *
အီးမေးလ်အားလုံးအမျိုးအစားများများအတွက်●လက်ငင်းတွန်းအားပေးဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ - ဂျီမေးလ်, Hotmail က / Outlook, ချိန်း, Yahoo Mail iCloud, Google Apps, ရုံး 365 နှင့်မည်သည့် IMAP ကိုအကောင့်။
●ဖတ်ပြေစာများ - ကိုဖတ်ရှု-status ကိုသင်ပို့တိုင်းအီးမေးလ်ကိုရယူပါ။ ဒါ့အပြင်အဖြစ်မကြာမီအီးမေးလ်ကိုဖတ်ရှုနေသည်အဖြစ်အကြောင်းကြားရ။ တစ်ဦးချင်းစီမေးလ်ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူသင့်အီးမေးလ်ကိုဖတ်ရှုအတိအကျသူကိုသင်တို့သိကြ၏။
● Send နောက်ပိုင်းတွင် - ဇယားအီးမေးလ်များကိုနောက်ပိုင်းမှာလှေတျတျောမူခံရဖို့ပဲညာဘက်ကိုယခုအချိန်တွင်လက်ခံသူရဲ့အစာပုံးမှသူတို့ကိုကယ်လွှတ်ကြပြီ။ လက်ခံသူအီးမေးလ်များလျှင်လည်းသင်တို့အကြား၌အစီစဉ်ကိုအီးမေးလ်ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။
●သပ်ရပ် Inbox ထဲမှာ - အရေးကြောင်းအီးမေးလ်များအပေါ်အာရုံစိုက်။ အခြားဖိုလ်ဒါပေါင်းပင်ထွက်သတင်းလွှာနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအီးမေးလ်များနှင့်သင့် inbox ရဲ့အာရုံ-အခမဲ့စေ။ အားလုံးအီးမေးလ်အကောင့်အတွက် Gmail tabs များစဉ်းစားပါ။
●မှေး - တစ်ဦးပိုမိုအဆင်ပြေအချိန်တွင်နောက်ကျော Inbox ထဲမှာထံသို့လာရန်သင့်အီးမေးလ်များကိုသတ်မှတ်မည်။ ခရီးသွားလာနေစဉ်အရေးပါသောအီးမေးလ်ကိုရှိသလား? ကိုယ့် Desktop ကိုမှမှိန်းထားပါနှင့်သင်အဆင်သင့်ပါပဲတဲ့အခါမှသာကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ မှေးအီးမေးလ်များ, မဟုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု။
●ချိတ်ဆက် Apps ကပ - သင့်အီးမေးကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲသင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာတွေကိုဖြည့်။ Todoist, Evernote OneNote, Pocket, Trello နှင့် Asana ဟာနဲ့တူသင်အကြိုက်ဆုံးကုန်ထုတ်စွမ်းအား apps များရန်အရေးကြီးပါသည်အီးမေးလ်များကိုထည့်ပါ။
●ပြန်လည်စုစည်းမှု - ပြန်လည်စုစည်းမှုကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်သို့မဟုတ်တက်အောက်ပါကြောင်းလိုအပ်ချက်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ဟုပြောဆိုမှုများကိုပြန်လည်တတ်၏။ ဘာမျှမအက်ကြောင်းမှတဆင့်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာအစ, ကြောင့်ရက်စွဲများ, သတိပေးချက်များစသည်တို့နှင့်အတူအခြားမေးလ်ဖုံးလွှမ်း။ (သာအင်္ဂလိပ်အတွက်သာရရှိနိုင်)
●ပြန်လုပ်ရန် Send - အီးမေးလ်အမှားသင်ရုံစေလွှတ်တော်မူသောကျော Pull ။ အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သောသင်မိုဘိုင်းပေါ်မှာဆိုရင်နှင့်တစ်ဦးလျင် reply ဖို့လိုအပ်သည့်အခါ။
● 2-step verification မှာ - သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို & ဖုန်းကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူသင်၏နယူတန်အကောင့်ကာကွယ်ပါ။
●စာရင်းဖျက်ရန်တစ်ခုမှာ-click - ခဏမလိုချင်တဲ့အီးမေးလ်သတင်းလွှာထံမှနှုတ်ထွက်။
●စိတ်တိုင်းကျ Inbox ထဲမှာကိုပွတ်ဆွဲ - Delete, မော်ကွန်းတိုက်, ဖတ်အဖြစ်မာ့ခ်နဲ့တူလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်စိတ်ကြိုက်ရှည်လျား / ရေတိုကိုပွတ်ဆွဲ, ပမ်အဖြစ်မာ့ခ်နှင့်ပိုပြီး။
လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ OneDrive စသည်တို့ကို Google Drive ကို, Box ကို Dropbox, တူသောသင်အကြိုက်ဆုံး cloud storage service ကိုမှ●ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်အီးမေးလ်ပူးတွဲ။
●အဝေးမှသင်သည်သင်၏ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးအတွက်သင့်ရဲ့ဒေတာ Wipe ။
●စိတ်တိုင်းကျ Folder ကို Sync ကို - သင့်ဖိုလ်ဒါထဲမှာဆင်းသက်ကြောင်းအီးမေးလ်များနှင့် ပတ်သက်. အသိပေး Get ။
သို့သော်စောင့်ဆိုင်း ... ပိုပြီးအဲဒီမှာပဲ!
- က HTML လက်မှတ်ပေါင်း
-်/ ပိတ်စကားဝိုင်းများ Turn
- passcode Lock ကို
- Interactive မှအကြောင်းကြားစာများ
- ညျ့ဝ Inbox ထဲမှာ
Gmail, Google Apps ကပများနှင့်ချိန်း (EWS) အတွက်ပြက္ခဒိန်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင့်အီးမေးလ် & ပြက္ခဒိန် app များကိုအကြား switching မပါဘဲစီမံခန့်ခွဲရန်။
နယူတန် $ 49.99 / တစ်နှစ်တစ် In-app ကိုကြေးပေးသွင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
စျေးတည်နေရာအလိုက်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ subscriptions သင်၏ Google အကောင့်အားဖြင့်သင်တို့၏ခရက်ဒစ်ကဒ်မှတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ သင့်စာရင်းပေးသွင်းထားအလိုအလျှောက်လက်ရှိကာလမကုန်မီဖျက်သိမ်းမှာအနည်းဆုံး 24 နာရီမဟုတ်လျှင်ပြည့်ကြလိမ့်မည်။ Account Settings ကိုအတွက်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုများစီမံခန့်ခွဲရန်။
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: https://newtonhq.com/k/tos
ဒါက update ကိုတည်ငြိမ်မှုတိုးတက်မှုများနှင့် bug ပြင်ဆင်ခြင်းများပါရှိသည်။
နယူတန်မေးလ် - ဂျီမေးလ်, Outlook များအတွက်အီးမေးလ် App ကို, IMAP ကို
30.31 ကို MB
အီးမေးလ် - စာအတွက်…
အီးမေးလ် - မြန် & မြန်
အီးမေးလ်ပို့ရန် - မြန် ...
Cleanfox - သန့်ရှင်း ...
MessageLOUD: စာသား ...